Chekutanga episode yeiyo Kufamba Vakafa: Iyo Nyowani Frontier yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Kufamba Kwevakafa: Iyo Nyowani Frontier Yekutanga Chikamu Yemahara kune Yakatemerwa Nguva
Nhepfenyuro yeterevhizheni Iyo Kufamba Vakafa, iyo yanga iri mumhepo kwemakore manomwe, yave chirevo munyika yeZombies. Mazhinji akateedzana akafuridzirwa neizvi, isu tinogona kuzvidaidza, zvekare zvevakafa vakafa seZ Rudzi, Itya Vakafamba Vakafa, iyo yekupedzisira inosiya zvakawanda zvingadiwa apo yekutanga kunyangwe iine bhajeti rakamanikana, iri kunyanya kunakidza ne mashoma anobata kuseka kunogumira pane surreal. Asi akateedzana aya akafuridzirawo yakawanda mitambo yemavhidhiyo, senge yatiri kutaura nezvayo nhasi: Kufamba Kwevakafa: Iyo Nyowani Frontier, mutambo une mutengo wenguva dzose muApp Store ye4,99 euros uye icho chine chikamu chekutanga, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuchirodha mahara.
Mukutsanangurwa kweApp Store tinogona kuverenga:
Mushure mekunge nzanga yabvarurwa pamaoko easina kufa, homwe dzebudiriro dzinobuda mumhirizhonga. Asi pamutengo upi? Vapenyu vanogona kuvimba nemuganhu mutsva uyu here? NaJavier, murume wechidiki akatsunga kutsvaga mhuri yaakatorerwa, unosangana nemukadzi wechidiki akasangana nekurasikirwa kwake kusingafungidzike. Zita rake ndiClementine, uye magumo avo akabatanidzwa mune imwe nyaya umo sarudzo dzese dzavanoita dzinogona kuve dzekupedzisira.
Kufamba Kwevakafa: Iyo Nyowani Frontier ndeye mashanu-episode akateedzana, imwe neimwe inogona kutengwa yakazvimiririra kune 4,99 euros, kunyangwe homwe iripowo inopihwa pamwe navo vese kusara kwekutanga yakaiswa mumutambo. Kuti unakidzwe nemutambo, chishandiso chedu chinofanirwa kutarisirwa neIOS 9 kana kupfuura uye inowirirana neiyo iPhone 5s zvichienda mberi, iPad Mini 2 zvichienda mberi, uye iPad Mhepo kuenda kumberi. Zvinoda hushoma hwe880 MB yemahara pane edu zvishandiso uye zvinyorwa zvemutambo zviri muchiSpanish, saka mutauro hauzove unowedzera kuoma kumutambo.
Kufamba Vakafa: A Nyowani Muganhuvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Kufamba Kwevakafa: Iyo Nyowani Frontier Yekutanga Chikamu Yemahara kune Yakatemerwa Nguva
Zvandinotarisira kubva kuApple muna 2017
Haudi iwe kuenzanisa zvishongo? Motiv rin'i yakagadzirirwa iwe